Progressive Voice Myanmar » တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဂွမ်ဆိုင်းအောင်အား၊ အစိုးရစစ်တပ်၏ တပ်သားတစ်ဦးမှ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့တွင်း၌ ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခြင်းအပေါ် ကျောင်းသားလူငယ်ထုနှင့် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်
Statement 305 Views
June 23rd, 2016 • Author: 142 Civil Society Organizations •2minute read
မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ကျွန်းပင်သာရပ်ကွက်၊ အိမ်အမှတ်(၁/၁၀၇)တွင်နေထိုင်သော (ဘ)ဦးဂေ၀ါနှင့် (မိ)ဒေါ်လထော်နန်အိန် တို့၏သား ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ပထမနှစ်ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်သူ မောင်ဂွမ်ဆိုင်းအောင် အသက်(၁၉)နှစ်အား၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၀ ရက်နေ့ ည ၉ နာရီခွဲအချိန်တွင်၊ မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်(မပခ) လက်အောက်ခံ ထောက်ပို့ တပ် (၇၂၇) မှ တပ်သားမောင်မောင် (ကိုယ်ပိုင်အမှတ် တ/၅၁၁၅၆၈) ဗလမင်းထင်တံတားလုံခြုံရေးအစောင့် တပ်သားမှ သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်သော ဖြစ်ရပ်ဆိုးဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
တရားဥပဒေအား လေးစားလိုက်နာမှုမရှိဘဲ မထီမဲ့မြင်ပြုကာ ကျောင်းသားလူငယ်တစ်ဦးအား ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်း သည် ကျွန်ပ်တို့မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ကျောင်းသားထု၏ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် လုံခြုံရေးအား ဆိုးရွားစွာခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်ရပ် တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။
အစိုးရစစ်တပ်အနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ကျောင်းသားလူငယ်တစ်ဦးအား တရားမဲ့ရက်စက်စွာ ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းကို ကျွန်ပ်တို့ ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံ့ချသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစတင်ခဲ့သော ကချင်ပြည်နယ်တစ်ကျော့ပြန်စစ်ပွဲကာလတစ်လျှောက်တွင် လူ့အခွင့်အရေးကိုပြင်းထန်စွာ ချိုးဖောက်ခဲ့သောဖြစ်ရပ်များအနက်၊ ဖားကန့်မြို့နယ်မှ ကိုးတန်းကျောင်းသူမရမ်ဂျာဆိုင်းအိန် ပစ်သတ်ခံရသောဖြစ်ရပ် ကဲ့သို့ ယခုမြစ်ကြီးနားမြို့မှ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဂွမ်ဆိုင်းအောင်၏အဖြစ်အပျက်သည်လည်း တရားမျှတမှုမရှိပဲ ပြီးဆုံးသွားမည်ကို ကျွန်ပ်တို့ အလွန်အမင်းစိုးရိမ်သည်။
ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်အစပြုလာချိန်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) အစိုးရဦးဆောင်မှုဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးစေ့စပ် ဆွေးနွေးနေချိန်တွင် ယခုကဲ့သို့ ကျောင်းသားလူငယ်တစ်ဦးအား လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကင်းမဲ့စွာ ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခြင်းသည် လက်ရှိတည်ဆောက်နေသော ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အား ထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့် ဤလုပ်ရပ်ကို ငြိမ်းချမ်းရေး မြတ်နိုးသည့် အကျွန်ပ်တို့ ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ရှုံ့ချသည်။
ထို့ကြောင့် သမ္မတ ဦးထင်ကျော်ဦးဆောင်သော ပြည်သူ့အစိုးရအနေဖြင့်၊ ၂၀၁၆ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် အစိုးရတပ်သားတစ်ဦး၏ သေနတ်ဖြင့်ပစ်သတ်ခံရသည် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား လဘန်ဂွမ်ဆိုင်းအောင်၏ဖြစ်ရပ် အား တရားမျှတမှုရှိပြီး၊ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာဖြင့် အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် အရပ်ဘက်တရားရုံးတွင် တရားစီရင်ပေးပါရန် ကျွန်ပ်တို့အလေးအနက် တောင်းဆိုလိုက်သည်။
Htun Aung Kyaw (Myitkyina) – 09452018282
Lat Maw (Yangon) – 09796937265
Paul (Myitkyina) – 094400582473
Esther (Yangon) – 09421116714
Myat Thu (Myaung Mya) – 09796636737
Statement by student organizations and civil society groups Re:the murder of ethnic Kachin student, Gum Seng Awng, byaBurmese soldier in Myitkyina
On 20th June 2016, Gum Seng Awng, aged 19 andafirst-year student at Myitkyina Computer College, was shot dead around 9:30PM in Myitkyina, Kachin State, byaBurmese government soldier – private Maung Maung (Tha/511568) from the 727th Logistics and Transportation Battalion under Northern Regional Military Command. At the time of the incident, the soldier was on duty asaguard at Balaminthin Bridge. The deceased student was the son of Mr. De Wa and Ms. Lahtaw Nang Ing, residing at house number 1/107, Kyunpintha quarter, Myitkyina, Kachin State.
This killing of an ethnic Kachin student attests to the military personnel’s complete disregard for the existing laws, posingaserious threat to collective dignity and the safety of whole student communities from Burma. We strongly condemn such an abhorrent act against an unarmed student byagovernment soldier.
Since 2011, when the civil war was resumed in Kachin State, there has beenaseries of grave human rights violations against civilians such as the case of Miss. Ja Seng Ing,aninth grader who was shot dead by Burmese government soldiers in Phakant township. Her case ended without justice served. We are seriously concerned that the murder of Gum Seng Aung will end inasimilar way with no justice and accountability.
Whilst the country is inching towards the path to democracy, the killing of Gum Seng Awng with no regard for his dignity or right to life could damage the ongoing peace process led by the National League for Democracy (NLD) government. Considering this, we strongly denounce the horrendous killing ofastudent.
We urge the President Htin Kyaw-led government to bring the perpetrator to justice with full force of the State and have him tried inacivilian court inatransparent and fair manner.
There are (142) groups undersigned, demand justice for Gum Seng Awng.
သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာချက် မြန်မာဘာသာကို ဤနေရာတွင်ရယူနိုင်သည်။